नेकपाभित्र झम्सिखेल बिर्साउने भैंसेपाटी भेला
नेकपाभित्र झम्सिखेल बिर्साउने भैंसेपाटी भेला प्रचण्डले वामदेव, झलनाथ र माधवलाई साथ लिन खोजेपछि भाँडियो सभामुख सहमति
कृष्ण गिरी काठमाडौं, २८ पुस
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र सभामुख उम्मेदवार तय गर्ने विषयमा रस्साकस्सी जारी छ ।
नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) बीच सभामुखमा कसलाई अघि सार्ने भन्ने विषयले विवाद निम्त्याइरहँदा वर्तमान उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेको पछिल्लो अडानले नेकपा थप अफ्ठेरोमा छ ।
नेकपाभित्र एकपछि अर्को समस्या ल्याउने जड भने गत २३ पुसमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अनुपस्थितिमा बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठक बनेको नेकपाका नेताहरू बताउँछन् ।
के भयो भैंसेपाटी भेलामा ?
सभामुख चयनको विषय पेचिलो बन्दै गएपछि गत २३ पुसमा पार्टीका प्रस्तावित उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले निजी निवास भैंसेपाटीमा नेताहरूलाई डिनरका लागि निम्ताे गरे ।
निमन्त्रणा मान्न पुगे अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ तथा भीम रावल । गौतमको निवासमा उपस्थित रावल स्थायी कमिटी सदस्य हुन् भने सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल भेलामा सहभागी थिएनन् ।
सचिवालयका अर्का सदस्य रामबहादुर थापा बादल भने चीन भ्रमणमा गएका कारण उपस्थित थिएनन् ।
गौतमको घरमा भएको नेताको जमघटमा सचिवालयका नेतामध्ये अध्यक्ष ओली र ओलीनिकट मानिने पौडेल र पोखरेल मात्र अनुपस्थित थिए ।
ओलीनिकट नेताको अनुपस्थितिमा अर्का अध्यक्ष दाहालले छलफलका लागि दुई एजेण्डा प्रस्तुत गरे । पहिलो थियो सभामुख चयन र अर्को एमसीसीको अनुमोदन ।
बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले आफू र अर्का अध्यक्ष ओलीबीच भएको कुराकानीबारे नेताहरूलाई जानकारी गराए ।
उनले दुई जनाबीच भागवण्डामा सभामुखको उम्मेदवार चयन गर्न सहमति नभएको बताएको बैठकमा सहभागी एक नेताले शिलापत्रलाई जानकारी दिए । बैठकमा एमसीसीलाई शंकाको नजरले हेरेका दाहालले सभामुख भने प्रष्टसँग तत्कालीन माओवादी केन्द्रले नै लिने अध्यक्ष ओलीसँग प्रस्ताव गरेको ब्रिफिङ गरे ।
तर ओलीले संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई नै अघि सार्न भनेपछि कुरा नमिलेको नेतालाई जानकारी गराए । आफ्नो प्रस्ताव मानिनसकेको भन्दै भेलामा सहभागी नेतालाई आफ्नो पक्षमा बोल्न दाहालले आग्रहसमेत गरे ।
तर भेलामा उपस्थित वरिष्ठ नेता खनाल भने भैंसेपाटीमा सभामुख र एमसीसीका विषयमा ‘खास कुरा नभएको’ बताउँछन् ।
खनालले खास कुरा नभएको बताए पनि बैठकमै सहभागी एक नेताले भैंसेपाटीमा दाहाल ब्रिफिङवारे अर्का अध्यक्षलाई ओलीलाई सविस्तार जानकारी गराइदिए । र, दाहालको यो ब्रिफिङपछि अध्यक्ष ओली रूष्ट छन् । आफ्नो र आफ्ना पक्षका नेताको अनुपस्थितिमा दाहालले सहयोग मागेको भन्दै उनी दाहालसँग रूष्ट छन् ।
भैंसेपाटीको असर सचिवालय बैठकमा
भैंसेपाटी बैठकपछि दुई अध्यक्षबीच पुनः दूरी बढेको छ । दाहालसँग रूष्ट बनेका ओलीले गत शनिबार (२७ पुस) को सचिवालय बैठकमा उपस्थित नभएर दाहालसँग असन्तुष्ट रहेको संकेत दिएको ओलीनिकट एक सचिवालय सदस्य बताउँछन् ।
भैंसेपाटी बैठकपछि ओली शनिबारकोे सचिवालय बैठकको जिम्मा दाहाललाई छोडेर अस्पताल गए । ओली अनुपस्थित सो बैठकले उपसभामुख डा. तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा दिन लिखित निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।
पार्टी सचिवालयको निर्णय निजी सचिवालयले बतायो
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले आफ्नो अनुपस्थितिमा उपभामुखलाई राजीनामा दिन लिखित निर्देशन दिने निर्णय आफ्नो निजी सचिवालयबाट थाहा पाएको ओलीनिकट नेताको दाबी छ ।
दाहालले उपसभामुखलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिनेगरी भएको निर्णय ओलीलाई नसुनाएपछि उनी थप रूष्ट बनेको ओली सचिवालयका एक सदस्यको दाबी छ ।
उपसभामुख डा. तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएलगत्तै (आइतबार) बालुवाटारमा नेकपाका अध्यक्षद्वय, महासचिव र सचिवालय सदस्य तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसहितले उपसभामुख डा. तुम्बाहाम्फेलाई डाकेर छलफल गरे ।
सो छलफलमा ओलीले राजीनामा दिन निर्देशन दिने सचिवालय बैठक निर्णयमा तटस्थ बसे । सचिवालय बैठकको निर्णयमा उपसभामुखले समेत थाहा पाउने गरी ओली तटस्थ बसेका कारण उपसभामुख डा. तुम्बाहाम्फेले प्रष्ट भाषामा राजीनामा नदिने बताइन् ।
उपसभामुखकाे अभिव्यक्तिपछि पनि ओलीले कुनै प्रतिक्रिया नजनाएपछि नेताहरूबीचको बैठक सकिएको एक नेताको भनाइ छ ।
झम्सिखेल ब्यूँताउने भैंसेपाटी बैठक, असर सभामुख चयनमा
१० माघ २०७५ मा ओली को अनुपस्थितिमै ललितपुरको झम्सिखेलमा बसेको बैठकले ओलीले एकलौटी रूपमा पार्टी र सरकार चलाएको र यसलाई रोक्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो । त्यो बैठकपछि ओली–दाहाले सम्बन्धमा लामो समय तिक्तता आयो ।
अहिले भैंसेपाटी बैठकपछि फेरि दुई अध्यक्षबीचको सम्बन्ध झम्सिखेल बैठकपछिकै अवस्थामा पुन्ने संकेत देखिएको भन्दै नेकपाकै नेताहरू चिन्ता गर्न थालेका छन् ।
नेताहरूको सम्बन्ध उतारचढाव हुनु स्वाभाविक हो । नेताहरूबीचको सम्बन्धमा उतारचढाव हुन्छ भन्छन् स्थायी कमिटी सदस्य हरिबाेल गजुरेल । सम्बन्ध स्थायी हुँदैन । अध्यक्षद्वयको सम्बन्ध निरन्तरतामा नै छ । अहिले अलि दूरी बढेको छ । तर त्यो पनि स्थायी होइन,’ उनी भन्छन् ।
आइतबार बालुवाटारमा भएको पाँच जना नेताहरूको छलफलमा पनि ओलीले भैंसेपाटी बैठकलाई लक्षित गर्दै सभामुख चयन र संविधान संशोधनबारे आफैं सहमति जुटाई निर्णय लिन दाहाललाई आग्रह गरेका थिए ।
ओलीले सो बैठकमा दाहाललाई लक्षित गर्दै ‘सभामुख र संविधान संशोधन गरी राष्ट्रियसभाका सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउने तयारीमा लाग्नुभएको छ, सभामुख पनि तपाईंहरू नै बनाउनुस्’ भनेको बैठकका सहभागी एक नेताको दाबी छ ।
भैंसेपाटीमा सचिवालयका नेताहरूले ओलीविरूद्ध बैठक गरेपछि सभामुखको उम्मेदवार चयन गर्न ओलीले दोहोरो भूमिका खेलिरहेको अध्यक्ष दाहालनिकट निकट एक स्थायी कमिटी सदस्य बताउँछन् ।
‘प्रधानमन्त्रीको दोहोरो भूमिकाका कारण नै अहिले सभामुखको उम्मेदवार चयनमा समस्या आएको हो । उहाँले नै यो विषय अल्झाउन खोज्नुभएको छ । त्यही भएर उपसभामुखले पनि अड्डी कसेर बस्नुभएको हो,’ ती नेता भन्छन् ।
ओली र प्रचण्डबीच भैंसेपाटी बैठकबाट समस्या आएको ओलीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्य बताउँछन् । ‘टाउको गनेर ओलीका विरूद्ध बैठक गर्नु भनेको अहिले पार्टी र सरकारलाई नै घेराबन्दी गर्नु हो,’ ओलीनिकट एक स्थायी समिति सदस्य भन्छन् ।
तुम्बाहाम्फे हावी हुँदा दाहाल कमजोर
शनिबारको सचिवालयको बैठकले गरेको निर्णयअनुसार तुम्बाहाम्फेले राजीनामा दिए पनि उनलाई नै सभामुख बनाउनुपर्ने अवस्था आएमा भने प्रचण्ड संसदीय राजनीतिमा कमजोर देखिनेछन् ।
अहिले नेकपाको नेतृत्वमा शक्तिका लागि बढी अभ्यास भइरहेको बताउँछन् लेखक उज्ज्वल प्रसाईं । उनले भने, ‘उद्देश्य केका लागि हो, त्यो प्रमुख हुन्छ । विकास, संघीयता कार्यान्वयनका लागि भए एक अवस्था हुन्थ्यो । तर यहाँ त कसरी आफू शक्तिशाली हुने भन्ने होडबाजी चलेको छ । त्यही अभ्यास अहिले पनि भइरहेको छ ।’
प्रकाशित मिति: सोमबार, पुस २८, २०७६, १२:३५:००
मलाई हटाउने र राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने तयारी छ, त्यसको सूचना मसँग छ : प्रधानमन्त्री
ओली निकट नेता प्रचण्ड भेट्न खुमलटारमा
ओलीले पार्टीको निर्णय मान्नु पर्ने अगेनो रेष्टुरेन्ट भेलाको निष्कर्ष
ओलीविरुद्ध अगेनो रेष्टुरेन्टमा प्रचण्ड-नेपाल समूहको भेला
ओलीलाई प्रचण्डको जवाफ : तपाईंलाई भारतले होइन, मैले हटाउन खोजेको हो